UMSEBENZI WABATHUNYWA 25 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UMSEBENZI WABATHUNYWA 25UMSEBENZI ... 25
UPawulos ubhenela kuKhesare
251Akuba ntsuku-ntathu efikile kwelo phondo uFesto, wesuka eKhesariya, wahambela eJerusalem. 2Ababingeleli abaziintloko nabakhokeli bamaJuda, bezisa izityholo kuye ngoPawulos. Bamcenga uFesto 3ukuba ancede amse eJerusalem uPawulos, kuba babefuna ukumlalela endleleni, bamgwinte. 4Wathi uFesto kubo: “UPawulos uselugcinweni entolongweni eKhesariya. Ndibe nam ngokwam ndiza kuya khona kwakamsinyane. 5Iinkokheli zenu ze zihambe nam ukuya eKhesariya, ziye kummangalela khona, ukuba ngaba kukho ityala alenzileyo.”
6Akuba echithe malunga nesibhozo ukuya eshumini leentsuku phakathi kwabo uFesto, wabuyela eKhesariya. Ngengomso xa wayechophele amatyala, uthe makabizwe uPawulos. 7Akufika ke uPawulos, amaJuda awayevela eJerusalem athi emngqongile ambeka izityholo ezinzima, kodwa zazingenabunyaniso xa zizonke. 8UPawulos yena waziphendulela wathi: “Akukho nanye into endiyenzileyo echasene nomthetho wamaJuda, okanye *indlu kaThixo, okanye *uKhesare.”
9Ezama ukuzenza mhle kumaJuda, uFesto wathi kuPawulos: “Ungathanda ukuya eJerusalem ukuze ndilichophele khona ityala lakho ngezi zityholo?”
10Waphendula uPawulos wathi: “Apha ndimi enkundleni kaKhesare, kanye apho limelwe kukuthethwa khona ityala lam. Akukho nto ndiwone ngayo amaJuda, njengoko nawe ngokwakho uqonda. 11Ke ukuba umthetho ndiwaphule ndona kangangokuba ndimelwe kukugwetyelwa ukufa, andinqweneli kuyibaleka nayo loo ndawo. Kodwa ke ukuba azinabunyaniso izityholo endibekwa zona, akukho bani unokundinikezela kumaJuda. Ndibhenela kuKhesare.”
12UFesto ukhe wadlana indlebe namaphakathi akhe, wandul' ukuthi kuPawulos: “Ubhenela kuKhesare; kulungile ke, uza kuya kuKhesare.”
UPawulos phambi koAgripa noBhernike
13Ekuhambeni kwexesha ukumkani uAgripa nowakwakhe uBhernike baya eKhesariya, beye kuvuyisana noFesto ngokufika kwakhe. 14Emva kweentsuku bekhona uFesto wachazela ukumkani ngemeko kaPawulos, esithi: “Apha kukho indoda eyashiywa ingumbanjwa nguFelekis. 15Ndithe xa bendiseJerusalem, ababingeleli abaziintloko bamaJuda nabadala bazisa kum izityholo ngale ndoda ukuba ndiyigwebe. 16Kodwa ndabaxelela ukuba inkqubo yamaRoma ayivumi ukuba umntu agwetywe engakhange ajongane nabamangaleli bakhe aziphendulele. 17Bathe ke bakuza apha andachitha xesha, ndathi ngengomso ndalichophela ityala elo, ndathi mayibizwe le ndoda. 18Abamangali bavela bamtyhola, kodwa kungengazo iindawo ezimbi endandiba bomtyhola ngazo. 19Kuphela nje yaba yimpikiswano ngonqulo lwabo, nangendoda ethile eyafayo, egama linguYesu, athi yena uPawulos ihleli. 20Ndithe ngenxa yokungabi nabungqina buphathekayo ngeli tyala, ndaqonda kuPawulos ukuba akangethandi na ukuba eli tyala liye kuthethwa eJerusalem. 21Kodwa ke uPawulos usuke wabhenela *kuKhesare. Ubone ukuba makahlale engumbanjwa lide ityala lakhe libe nokuviwa nguMhlekazi ngokwakhe. Ke ndathi makagcinwe de ndimthumele kuKhesare.”
22Wathi uAgripa: “Nam ndingathanda ukukhe ndiyive le ndoda.”
“Uza kuyiva ngomso oku,” utshilo uFesto.
23Ngengomso uAgripa noBhernike bangena bewongekile apho enkundleni, benabaphathi-mkhosi namadoda aphambili apho edolophini. UFesto wathi makubizwe uPawulos, waza ke wangeniswa. 24UFesto wathetha wathi: “Kumkani Agripa, nani nonke nina nikhoyo apha, le ndoda niyibona apha ikhalazelwa ngawo onke amaJuda, apha naseJerusalem. Athi ayisafanelanga kudla bomi. 25Kodwa mna andifumananga nto ingáyenza igwetyelwe ukufa. Nangenxa yokuba yona ngokwayo ibhenele kuKhesare, nam ke ndigqiba ukuba ndiyithumele kuye. 26Kodwa andikabi nayo inkcazelo ezeleyo endingayenzela uKhesare ngayo. Kungoko ke ndiyizise apha phambi kwenu, ngakumbi wena, kumkani Agripa, ukuze sithi emva kokulivavanya eli tyala layo, ndikwazi ukubhala ngalo. 27Kuba kum ayiqondakali into yokuba ndithumele umbanjwa zingacacanga izityholo abekwa zona.”